'कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ, तर व्यस्थापन गर्न सकिन्छ' : मन्त्री खतिवडा | Kendrabindu Nepal Online News
‘कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ, तर व्यस्थापन गर्न सकिन्छ’ : मन्त्री खतिवडा
५ चैत्र २०७६, बुधबार १९:२२
छिमेकी मुलुक चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोवेल कोरोना ‘कोभिड १९’ भाइरसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परे पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् । कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिँइ सकेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण तत्काल कसैमा नदेखिएपनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेको छ । यसले नेपालको सेवा, व्यापार, पर्यटन लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर परेको छ । त्यसै सेरोफेरोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित अंश
कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले कुनै सतर्कता देखाएको छैन । सरकार साच्चिकै साइलेन्ट भएको हो ?
सरकारले एक अल्टरनेट डे मै समिक्षा गरेर समस्याबारे छलफल गरी राखेको छ । मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भने जति जोखिम हो त्यति मात्रै आकलन गरौँ र त्यति मात्रै हामीले तयारी गरौँ । जोखिमलाई बढी त्रसित बनाउने गरी व्याख्या पनि नगरौँ र कम सतर्कता अपनाएर भोलि जोखिममा पर्ने काम पनि नगरौँ । त्यसैले अहिले हामी जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा नै छौं । हामीसँग आन्तरिक रुपमा संक्रमण छैन बाह्य तहबाट संक्रमण हुन सक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरुमा जाँच गर्ने काम हो भइरहेको छ ।
संक्रमणको असर के के कुरामा देखिन थालेको छ ? सरकारको उपस्थिती कहा खोज्ने ?
कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको प्रभाव आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा परेको छ । समाजिक क्षेत्रमा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर हो । आर्थिक क्षेत्रमा छिटो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसपछि केही निर्माणजन्य व्यवसाय, सेवा व्यवसाय, व्यापारहरु प्रभावित भएका छन् । तिनिहरुको बारेमा हामीले अहिलेसम्म भएको क्षति नोक्सानीको आकलन र त्यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरिरहेका छौँ।
सरकारले स्टक डिस्कलोजर गर्नु पर्दैन ?
स्टक डिस्क्लोजर गराउने अहिले बजारमा अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव मास्कको उदाहरण त विश्वव्यापि रुपमै लिए भयो अनि स्यानिटाइजरको अभाव पनि विश्वव्यापि रुपमै छ । खासगरी खाद्यान्न र अरु केही आपूर्तिजन्य वस्तुहरु जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको कुनै अभाव छैन् । हिजो मूल्य घट्छ भनेर केही डिपोहरुले डिजेल पेट्रोल उठाएनन त्यसकारणले अलिकति लाइन देखियो आजपनि बिहानसम्म थियो अव अहिले दिउसोबाट त्यो समस्या रहेन् । खाद्यान्नको अभाव छैन हामीसँग सबै छ । अव बजारको अनुगमन र त्यसमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित निकायहरु सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाउन पर्छ त्यसो हो भने मलाई लाग्छ यस विषयमा हामीले धेरै गर्न सक्छौं ।
यसको प्रारंभिक विश्लेषणमा अवस्था कस्तो छ ?
अहिले तीन चारवटा क्षेत्रमा अलि बढी प्रभाव परेको छ । प्रत्यक्ष होटलको अक्कुपेन्सी घट्यो तपाइहरुले नै रिपोर्टीङ गरिराख्नु भएको छ । हवाइ जहाजको प्यासेन्जर संख्या घट्यो । त्यो सँगैका ट्राभल टेकिङ्का कुराहरु पनि सबै घट्ने नै भए । पहिलो असर पर्यटन उद्योगमा प¥यो । त्यसमा माघसम्मको तथ्याङ हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि छ ।
सरकारको फिल गुड फ्यक्टर त देखिएन भन्छन् नी दुई वर्षमा ?
त्यस्तो होइन हामी कहाँ तीन तहको सरकार छ । मुलुकको अर्थमन्त्री एउटै भन्ने छ तर यहाँ ७ सय ६१ वटा अर्थमन्त्री छौं । सबैले आ– आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । त्यो फिल गुड हुने एउटा पाटो चाहिँ के पनि हो भने स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेका कतिपय कामहरु योजना सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन । जनसेवासँग सम्बन्धित हुन्छन । ति कुराहरुमा पनि शंका लिने आरोप प्रत्यारोप पनि हुने डर हुन्छ । दोस्रो कुरा कतिपय हामीले तलको तहहरुलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त तहले क्षमता विकास होस अधिकार प्रत्यायोजन होस संगठन संरचना होस कर्मचारी होस ती सवै पु¥याउन नसकेको कारणले पनि अलिकति ढिलाई भएको हुन सक्छ ।
interview, मन्त्री खतिवडा
Prevदैनिक उपभोग्य बस्तुमा चरम कालोबजारी, उपभोक्ता मारमा
एनसेलले ल्यायो युवा लक्षित नयाँ योजनाNext
‘जनजीवन सरल बनाउन बन्दाबन्दी खोलेको हो’ : मन्त्री खतिवडा
कोरोना नियन्त्रणमा १ नम्बर प्रदेशबाट अरुले सिके हुन्छ : शेरधन राई (मुख्यमन्त्री, भिडियोसहित)
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न ‘रिकभरी’को योजना बनाइँदैछ :मन्त्री खतिवडा
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपभोक्तामैत्री बन्न मन्त्री खतिवडाको आग्रह
महराकाे मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले अब के गर्ला ? (भिडियोसहित)
“मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर भनेकै छु त”-डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (उपसभामुख)